rbz Archives - The Source
2 weeks ago by adminPolicy
Annual broad money supply up 30pct in July-RBZ
HARARE, October 9 (The Source) – Zimbabwe’s annual broad money supply recorded a 29,61 percent growth in July to $6,56 billion, driven by an increase in deposits, latest data from the central bank has shown.
VICTORIA FALLS, September 28 (The Source) – Reserve Bank of Zimbabwe deputy governor Kupukile Mlambo has proposed that the country introduces more bond coins than notes into the local market to curb high circulation of bond notes in the informal market. Unlike the bond notes,… Read More
Cooking oil shortages loom as manufacturers fail to import raw materials
HARARE, September 26 (The Source) – Shortages of cooking oil in Zimbabwe are imminent following a cut in foreign currency allocations to manufacturers by the central bank. The Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) tightly controls foreign currency which is in short in the southern… Read More
Zim to begin offshore dividend repatriation next month
5 months ago by AlfonceUncategorized
HARARE, September 8 (The Source) – Zimbabwe will next month commence repatriation of sale proceeds and dividends for foreign investors on the Zimbabwe Stock Exchange (ZSE), following establishment of the country’s Portfolio Investment Fund (PIF). Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) governor John Mangudya yesterday said… Read More
HARARE, May 3 (The Source) – Zimbabwe’s central bank is offering a 5 percent reward to whistleblowers reporting on individuals, traders and firms hoarding, selling or illicitly funneling cash out of the country, governor John Mangudya announced on Wednesday. The southern African country, which adopted… Read More
Women’s Bank launch postponed indefinitely, man to head board
HARARE, March 9 (The Source) – Zimbabwe’s government has appointed a man to chair its Women’s Bank, which is being set up to support female entrepreneurs. The launch of the bank, initially slated to coincide with International Women’s Day celebrations on Wednesday, has now been… Read More
HARARE, December 15 (The Source) – The value of transactions processed on Zimbabwe’s National Payment System (NPS) increased from $1,2 billion to $1,5 billion as the volume of transactions went up by 13 percent in the week the Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) introduced bond… Read More
HARARE, December 12 (The Source) – The Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) has ordered a reduction in bank withdrawal fees, which will see the charges come down to a maximum of 1 percent and 1.25 percent of amount withdrawn for ATM and over-the counter transactions,… Read More
HARARE, November 28 (The Source) – The Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) says it has fined the state-owned People’s Own Savings Bank (POSB) $500,000 — the equivalent of 6 percent of its 2015 net profit — after the bank’s employees leaked images of bond notes… Read More